Ny kabary malagasy « RENCONTRE NATIONALE SPORTIVE
« Andrianiko ny teniko, ny any ny hafa ho feheziko On se rend aux R.N.S. comme on se rend à des Jeux Olympiques tellement c’est un moment à part. »
“Ny havozo hono hanitry ny ala, ny rambiazana hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa no hanitra maha-Malagasy.”
Samy manana ny vako-manitra sy ny firafitry ny fiaraha-monina ao aminy ny firenena tsirairay avy, mampitolagaga ny fahendrena raiketin’izy ireny, noho izany, mendrika hodinihana sy averina amin’ny toerany izay hita fa antonona amin’ny vanim-potoana mifandimby.
“ Ny havozo hono hanitry ny ala, ny rambiazana hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa no hanitra maha-Malagasy”. Sompitra iray nitahirizan’ny Ntaolo ireo fahalalana sy fa- hendrena ary ireo traikefam-piainana maro samihafa ny kabary.
Tsy nilatsaka avy any an-danitra anefa izany kabary izany, na nitrebona ho azy avy amin’ny tany fa manana ny lalana hizorany izy dia ny tendrombohitra niteraka vodivona, vo-divona niteraka lohasaha, lohasaha niteraka loharano, lo-harano nipoiran’ny ony ka nipoiran’ny kabary. Tsy maintsy fantarina araka izany ny tantarany mba hahafahana mampita ny soatoavina raiketiny amin’ny taranaka any aorina.
Ny nahaterahan’ny kabary sy ireo izay nisantatra azy voalohany
Ny tantaram-pirenena Malagasy dia nizara vanim-potoa-na efatra lehibe : vanim-potoana Fahagola, vanim-potoa-na faha-Mpanjaka, vanim-potoana faha- Mpanjanatany, vanim-potoana faha-Repoblika. Tamin’ny Fahagola dia nanjaka ny fahazavan-tsaina sy ny fahendrena tena Malagasy. Nisongadina tamin’izany koa ny fahendreny ny Ntaolo satria ny olona dia mahalala an’Andriamanitra, manana toetr’Andriana ; olona vo-non-kitsemboka sy vonon-kihafy amin’ny sarotra rehetra. Tanjona tamin’izany ny mba ho “Olon-kendry”: I zay hahatsara ny taranaka. Karazan-tsekoly maro no namolavolana ny olona mba hahatsangy ny ho ary toy ny : sekoly amorom-patana na sekolin-dreny, ny sekoly amorom-pahatra. Ny sekoly amorom-patana dia na-nabeazana ny zaza sy ny vaton-jaza ary ny ankizy ary ny reny no nanantanteraka izany. Maro ny taranja nanazarana ny ankizy : ny ankamantatra, ny ankifidy, ny angano. Tsy natao hamolavola ara-tsaina fotsiny izany fa natao ihany koa mba hahatonga ny ankizy ho kinga vava izay fototra ijoroan’ny kabary. Nampahafantarina tao ihany koa ny lalam-pifanajana izay mifehy ny antanatohatry ny fiaraha-monina tamin’ny alalan’ny fipetraka na fihetsika.
Io sekoly amorom-patana io izany no sehatra niaingan’ny kabary izay fahalalana ambony indrindra teo amin’ny Ntaolo.
Teo ihany koa anefa ny sekoly amorom-pahatra izay sekoly ambony indrindra teo amin’ny Ntaolo satria natao mba hanabeazana ny zatovo ny lalam-piainana rehetra. Teo izy no nandinika ny tany, ny lanitra sns. Niainga teo ilay atao hoe “laha-pahatra” izay nihitatra niandalana ka tonga “Karajia” izay mifanakaiky indrindra amin’ny kaba-ry. Efa taona ela teto amintsika araka izany ny kabary no natao hanabeazana sy hialam-boly.
Tao aorian’izany vanim-potoana izany dia tonga ny Faha-Mpanjaka. Hita tamin’izany fa ny teny Malagasy dia iray fianakaviana amin’ny teny Tagalog, teny Indonesia, teny Malay.Koa raha ara-pototeny siantifika dia voalaza fa avy amin’ireo ny teny hoe “Kabary”: mitovy dika amin’ny teny hoe : Filazam-baovao.
Ao anaty firaketana dia voalaza fa ny Kabary Malagasy dia lahateny am-bava atao amim-peo mafy ho an’ny olona maro .
“Lahateny tsara indrindra, miravaka ohabolana sy hain-teny, ka mahafinaritra ny sofina ary mampihorika ny hasoany, mambabo saina amam-panahy ka tsy mamela ny mpihaino hisaina zavatra hafa afa-tsy izay voalazan’ilay miteny na toy inona na toy inona halavany”: io kosa ny famaritana izay nomena mpandinika anankiray. Maro karazana ny endrika kanto ao anatin’ny kabary fa saingy ireto manaraka ireto no tsy afa-mialà: Hainteny; ohabolana; sarin-teny mitovy hevitra. Koa rah any Kabary no tsy misy an’ireo dia tahaka ny ala ilaozan-tantely ka nialan’ny soa sy ny tsara
Mety hisy karazany maro ny drafitra izay atolotry ny bo-ky . Ny ho tanana anefa dia ny drafitra izay ahitan dingana dimy :
ALA RAKOTRA : fanaovana tari-dresaka sy fangatahan-dalana hiteny
ALA TSINY : fisorohana ny ala faditra amin’ireo fahadisoa-na mety hitranga na ara-pihetsika na ara-pitenenana
HASINA SY ARAHABA : fanomezam-panajana ny rafitra an-tanatohatry ny fiaraha-monina, fanolorana ny arahaba
RANJANA: filazana ny votoatin-kevitra
FEHINY : fanamafisana ireo hevitra fototra
Henatra ao anivon’ny fiaraha-monina Malagasy tokoa izany tsy fahaizana mikabary izany, ankehitriny anefa efa maro ny ivo-toerana izay ahafahana mandranto ny fianarana ‘Kabary’ toy ny ao amin’ny Alliance Française Andavamba ary tsy vitsy koa ireo sekoly izay efa mampiditra izany ao anatin’ny fandaharam-pianarany.■
Le 4 juillet 2011 ARTICLES 1 commentaire pour Ny kabary malagasy
25 février 2012 à 7 h 43 min
· Reply	Miarahaba tompoko,
Te hianatra kabary mafy aho tompoko.
Mba mangataka torohevitra.
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> « Andrianiko ny teniko, ny any ny hafa ho feheziko On se rend aux R.N.S. comme on se rend à des Jeux Olympiques tellement c’est un moment à part. »	La lauréate au concours de logo de la RNS 2015	Tangos Dallas remporte La Compétition Futsal des îles de l’Océan Indien La Compétition Futsal des îles de l’Océan Indien est organisée pour la seconde fois en Ile-de-France à l’initiative de l’Antenne de Paris du Conseil Général de La Réunion à… suite »C’est reparti !C’est reparti !